कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार पक्राउ पर्न सक्ने! - Malayakhabar
होम पेज फिचर कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार पक्राउ पर्न सक्ने!
कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार पक्राउ पर्न सक्ने!
काठमाडौं := बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले गरेको म्याद तामेलीको समय सोमबार सकिएको छ । विशेष अदालतले ३० दिनको हदम्याद जारी गर्दै उनलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो ।
उनीसँगै म्याद जारी भएका अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात विशेष अदालतको आदेशमा कारागार चलान भइसकेका छन् । उनले अब अदालतमा उपस्थित नहुनुको कारण पेस गर्न नसकेमा विशेष अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
अघिल्लो लेख नेपालमा किसान र उपभोक्तालाई उपयोगी एप – हाट बजार।
पछिल्लो लेख माग पूरा गर्न जसपालाई फारम भर्न लगाउँदै सरकार।